Kedụ ka Companlọ Ọrụ Na-akwakọba Ngwakọta Ndị Ahịa Ji Jiri Nnukwu data? | Martech Zone
Ọ bụrụ na enwere otu ụlọ ọrụ ebe a na-ejide ụda data na-aga n'ihu, ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị ahịa (CPG). Companieslọ ọrụ CPG maara na Big Data dị mkpa, mana ha anabatabeghị ya na ọrụ ha kwa ụbọchị.
Kedu ihe ngwugwu Ndị Ahịa?
Ngwongwo ndị akpọrọ akpọrọ (CPG) bụ ihe ndị na-achọ kwa ụbọchị na-achọ ngbanwe ma ọ bụ mmeju oge niile, dị ka nri, ihe ọveraụveraụ, uwe, ụtaba, etemeete, na ngwaahịa ụlọ.
Dabere na Bedrock Analytics, ndị ngwaahịa ndị a kwakọbara n'ahịa A na-eme atụmatụ ụlọ ọrụ na-ewepụta ihe karịrị ijeri $ 2 kwa afọ na United States naanị. E nwere ọtụtụ puku ndị nrụpụta CPG na-anwa ire ọtụtụ iri puku ụdị, yana ọtụtụ narị puku ihe n'ime ihe dị ka ndị na-ere ahịa 300. N'ezie, ndị na-ere ahịa 5 kacha elu ndị na-ere ahịa na-emejupụta ihe karịrị ọkara nke ahịa ya niile.
Ndị na-ere ahịa na-achọ ozi ndị ọzọ, nghọta na ntụzịaka sitere na ndị nrụpụta iji meziwanye ngwa ahịa ngwaahịa na ịbawanye ahịa n'ofe ngwaahịa. Ọ bụ ezie na ndị na-emepụta CPG buru ibu nwere akụ dị n'ime ụlọ iji nyefee nghọta ndị a, imirikiti ndị na-emepụta obere na ndị na-etiti enweghị.
Nchịkọta Bedrock na-enyere ndị na-emepụta CPG aka itinye ike nke nchịkọta data iji mee ka uto ma merie oghere dị. Ndị otu nọ ebe ahụ chọrọ ịma ma etu ndị ọkachamara CPG si eji data ha.
Data aghọwo ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ CPG iji mee mkpebi dị irè. Nke bụ eziokwu bụ na nnukwu pasent nke ndị nrụpụta CPG na-aga n'ihu na-agbaso mgba data nyocha. Nke ahụ bụ mkpa dị mkpa nke Bedrock ga-aga n'ihu ilebara anya - ma site na nyocha dịka nke a, yana site na nyocha nke nyocha data anyị nke AI.
Will Salcido, onye isi oche nke nchịkọta Bedrock
N’ụzọ na-adọrọ mmasị, nyocha ahụ gosiri na imirikiti ndị otu CPG nwere ohere ịnweta data, mana ha enwechaghị ntụsara ahụ n’ịgbasa data ahụ na nsonaazụ arụmọrụ. Nke a dị mwute, n'ihi na data ahụ dị oke mkpa n'ọtụtụ mkpebi dị n'ime, gụnyere:
Ahịa na Mbọn
Ndinọ Ihe Nghọta Nye Ndị Na-azụ Ihe
Inye Nghọta Nye Ndị Nchịkwa
Ha nyochara nhọrọ nke ndị ọkachamara CPG, ma wuo nsonaazụ nyocha na nke a na-enye aka ma na-enye ihe ọmụma.
Tags: nchịkọta bedrockngwaahịa ndị a kwakọbara n'ahịamarketingn'ọkwá